Maxaa kasoo baxay shirkii Shanta Madaxweyne? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa kasoo baxay shirkii Shanta Madaxweyne?
Shanta Madaxweyne ee Dowlad Goboleedyada ayaa shir khadka taleefanka ah oo ay habeen hore yeeshay waxa ay kaga hadleen arimaha cakiran ee ka taagan hab-maamulka doorashooyinka iyagoo muujiyay isku soo dhawaansho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirka oo la aaminsan yahay in ay qabab qaabiyeen Wakiilada Beesha Caalamka ayaa Madaxda Dowlad Goboleedyada lagu amray in ay isku tanaasulaan oo ay ka gudbaan qilaafka dhexdooda ka jira.
Wada hadal dheer kadib Keydmedia waxa ay ogaatay in lagu ballamay in lagu kulmo goob dhex-dhexaad ah oo aan wali la carabaabin, waxa ayna u badan tahay in madasha xigta ee madaxdu ku shiryso ay noqoto magaalada Baydhabo ee magaalada madaxda gobolka Bay.
Madaxweynha Koofur Galbeed, Lafta Gareen, oo kulankii ugu danbeeyay ee Qoorqoor, Guudlaawe iyo isagu Muqdisho kula kulmen Midiwga Musharixiinta, dusha saartay waan waanta lagu baadi goobayo xal u helidda muranka ka taagan doorashooyinka ayaa la filayaa inuu codsan doono in maamulkiisu marti galiyo shirka soo socda.
Doorkan uu qaatay Madaxweyne Lafta Gareen waxaa horay ugu fashilmay madaxweynaha Galmudug Axmed Qoor Qoor oo waqti badan kadib sheegy inuu ku fashilmay waan waanti uu waday, Midiwga Musharixiintuna sheegeen in ay kalsoonidii ay ku qabeen dhexdhexaadnimadiisa ay kala laabteen.
Waxaa lasoo dhaafay xilligii loo qorsheeyay in doorashooyinku bilaawdaan, halka xil-heynta Madaxweyne Farmaajo ay ka dhiman tahay wax ka yar Labo todobaad.
Farmaajo sida muuqata ma ogola inuu dalka ka qabto doorasho la isla ogolyahay, wuxuuna qorsheeyay in uu sidii doorashooyinkii Maamul Goboleedyada u boobo midda dowladda dhexe.